डा. केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, भदौ १३ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा सरोकारावाला निकाय र व्यक्तिसँग छलफल प्रारम्भ गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस डा‍. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै माइतीघरमा भव्य प्रदर्शन
याे पनि पढ्नुस सांसद आफ्नो सुविधा बढाउँदै !
समितिका सभापतिको निर्वाचन नभइसकेकाले बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बसेको थियो । समितिले भोलि नेपाल मेडिकल एशोसिएशनसँग अध्यादेशका सम्बन्धमा छलफल गर्ने जनाएको छ । फाइल फाेटाे
याे पनि पढ्नुस इन्द्रेनी बन्यो संसद्, देउवा आउँदा कांग्रेस सांसद उठे
ट्याग्स: Chikisa Shikshya Bidhyak, dr kc, samsad